Insider – Gold Channel Movies
Episode4Jun. 16, 2022
Episode5Jun. 22, 2022
JTBC ရဲ့ဒရာမာအသစ် “Insider” ကို GCverse တိုအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်မိုက်မိုက်အက်ရှင်ကားတွေမျိးမှ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကြည့်ရတာတန်စေမယ့်ကားဖြစ်မှာပါ။
Kim Yo Han(Kang Ha Nuel) ဟာ တရားရေးဆိုင်ရာသင်တန်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလုပ်သင်ဆင်းနေစဉ်မှာ ကံဆိုးမှုတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အကျင့်ပျက်အစိုးရရှေ့နေတစ်ဦးကို လျှိဝှက်စုံစမ်းရင်း မထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့် ဘဝပျက်သွားပြီး ထောင်ကျခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Yo Han တစ်ယောက် ထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန် ဘယ်လိုရှင်သန်မလဲ။ သူ့ကို သစ္စာဖောက်ပြီးတော့ ဘဝပျက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကို ဘယ်လိုကလဲ့စားပြန်ချေမလဲ။ အဆိုးတကာ့ထိပ်ခေါင်တိုအလယ်မှာ ဘယ်လိုအကြမ်းစားတိုက်ပွဲတွေကို ဆင်နွှဲရမလဲဆိုတာ GC Drama နဲ့အတူ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။
Kang Ha Neul ရဲ့ Comeback ဒရာမာကိုမှ အရင်ဇာတ်ကောင်နဲ့မတူဘဲ pocker face နဲ့လူကြမ်းကြီးအဖြစ် မိမိုက်နေမှာမို လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးနော်။ Ha Neul ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ပေးခဲ့တာမို ဒီကားဟာလည်း မတူညီတဲ့ရသတစ်မျိးနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို စိတ်ကျေနပ်စေဦးမှာပါပဲ။ အကျဉ်းထောင်ထဲက ကိုကိုရဲ့အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းကို အပတ်စဉ် GC Drama နဲ့အတူ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး။
Translated by Yin Cho, Thae, Faith & Athena